Yurub Archive - Gool FM - page 2	twitter
Kooxda Manchester United oo heshiis cusub ku abaal-marinaysa Marcos Rojo
(Manchester) 22 Maarso 2017 – Maareeyaha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa la soo warinayaa inuu go’aansaday inuu wadahadallo heshiis kordhin ah la furo difaaca kooxdaas ee Marcos Rojo.
Waxa uu markii hore u muuqday Rojo inuu ka tagayo garoonka Old Trafford, kaddib markii muddo uu qilaaf kala dhexeeyey kooxda, laakiin difaacan ayaa ku soo baxay qeyb muhiim ah shaxda macallin Mourinho ee xilli ciyaareedkan.
Xiddiga xulka qaranka Argentine 35 kulan u saftay tartammada oo dhan ayaa sida uu warinayo wargeyska The 
Maaliyadda cusub oo uu xulka England ku ciyaari doono kulanka caawa ay ka horjeedaan Germany oo la shaaciyey… + SAWIRRO
(Dortmund) 22 Maarso 2017 – Xulka qaranka England ayaa booqan doona Jarmalka, waxaana uu kulan saaxiibtinnimo ay caawa garoonka Signal Iduna Park kula dheeli doonaan dhiggooda Germany.
Weeraryahanka 19-sano jirka ah ee Man United Marcus Rashford ayaa lagu sawiray maaliyadda cusub ee uu xulka qarankiisa England caawa xiran doono kulanka ay la dheelayaan Germany.
Midkeedu waa buluug madow xigeen ah, waxaana farsamaysay shirkadda qalabka isboortiga samaysa ee Nike.
Kaddib marka ay wiilasha tababare Gareth Southgate la ciyaaraan Germany waxa ay iyaguna garoonka Wembley 
Tababarkii ugu dambeeyey oo uu xulka qaranka Germany isugu diyaarinayo kulanka caawa ee England… + SAWIRRO
(Dortmund) 22 Maarso 2017 – Xulka qaranka Germany ayaa ku jira tababarkii ugu dambeeyey oo ay isugu diyaarinayaan kulanka saaxiibtinnimo ee ay caawa garoonka Signal Iduna Park ku soo dhowaynayaan dhiggooda England.
Mesut Ozil, Julian Draxler iyo Mario Gomez ayaa dhammaantood caawa dhaawacyo uga maqnaanaya xulka tababare Joachim Low ee Germany.
Lukas Podolski oo 31-sano jir ah ayaa caawa calaamadda kabtannimo u xiran doona xulka Jarmalka, isagoo kulankiisii ugu dambeeyey ee 130-aad caawa u safan doona xulkiisa.
Xulka xafidanaya koobka Adduunka ayaa ciidooda 
Waxaa lagu wadaa inuu soo kabto xilliga ciyaarta, balse haddii uusan diyaar 
(Milano) 21 Maarso 2017 – Milan TV oo ah hilinka rasmiga ah ee ku hadla afka AC Milan ayaa daboolka ka qaaday in €100m oo ah dabaajigii 3-aad ee laga sugayay Sino-Europe Sports ay khasnadda Fininvest kusoo dhacayso todobaadkan.
Dalladan Chinese-ka ah ayaa wadda qorshe ay kooxdan camaaliqada ah kaga iibsanayso Silvio Berlusconi iyo Fininvest, balse waxaa heshiiskan hareeyay dib u dhacyo fara badan.
Kaddib markii la gudbey ballantii ugu dambaysay ee 3-dii Maarso, waxay SES iyo Fininvest ku heshiiyeen in la bixiyo dibaaji 3-aad 
Kooxdan Catalan-ka ah ayaa sidoo kale ku doodaysa inuu Dybala doonayo inuu iyaga ku biiro waloow uusan rakhiis ku iman doonin, waxaa 
Kooxda Rossoneri ayaa 2-1 waxaa uga badisay kooxda reer Torino oo rigoore heshay daqiiqaddii ugu dambaysay kaasoo uu dhaliyay Paulo Dybala iyadoo uu ka dhashay muran weli socda kaddib markii ay soo baxday in gacanta Mattia De Sciglio aysan ahayn mid bareer ah oo ay kubaddu ku dhacday uun (ball to hand), taasoo keentay in 
Rugcadaagii Germany ee Lateher Matheo oo 21 Maarso sanadkii 1961-kii ku dhashay Erlangen ee West Germany isla markaana maanta 55-sano jirsaday, Tababaraha iminka ee kooxda Everton Ronald Koeman oo 21 Maarso sanadkii 1963-kii ku dhashay Zaandam ee 
Cristiano Ronaldo oo Pepe ku garaacay abaal marinta laacibka ugu fiican Portugal…(Ka bogo sida loogu guuleystay abaal marinada kale)…+SAWIRRO
(Portugal) 21 Mar 2017. Cristiano Ronaldo ayaa loo magacaabay laacibka ugu fiican sanadka ee dalka Portugal xaflada sanadkaha ah ee Gala Quinas de Ouron taa oo ka dhacday magaalada Lisbon.
Ronaldo ayaa abaal marintan ku garaacay saaxiibkii Pepe iyo waliba goolhayaha Sporting Lisbon Rui Patricio.
Dhaliyaha ugu goolasha badan Real Madrid kaa oo Champions League kula guuleystay kooxdiisa iyo waliba Euro 2016 uu si lama filaan ah ula qaaday xulkiisa Portugal ayaa kol dhaweyd ku guuleystay Ballon d’Or iyo laacibka ugu fiican 